Sara Gutierrez. Kubvunzana nemunyori weThe Last Zhizha reUSSR | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo yekuvhara: neruremekedzo rwaSara Gutiérrez.
Sara gutierrez Iye ndiye ophthalmologist, asi anonyorawo kubva kune zvinyorwa kusvika kumishumo. Iyo inomhanyawo Ingenio de Comunicación agency, pamwe naEva Orue. Iye zvino aunza inoverengeka, yekutanga, yakanzi Zhizha rekupedzisira reUSSR. Muizvi indavhiyu Iye anotiudza nezvazvo uye anotiudza nezve zvimwe zvakawanda. Ndinotenda chaizvo nguva nemutsa zvawakandipa.
Sara Gutiérrez - Bvunzurudzo
LITERATURE CURRENT: Yako nyowani nyowani iri Zhizha rekupedzisira reUSSR. Chii chaunotiudza mairi?
SARA GUTIERREZ: Chekupedzisira uye chekutanga, kusvikira zvino zvese zvandanga ndanyora yaive rondedzero kana chirevo chikuru.
Zhizha rekupedzisira reUSSR Ndicho nyaya zvichibva parwendo rwandakaita kuburikidza nenyika dzeSoviet, kubva kuGungwa reBaltic kusvika kuGungwa Dema, mukati mevhiki yekutanga yaJuly 1991, mwedzi mishoma mushure mekuparadzwa kweSoviet Union.
Iyo yandakatanga seimwezve rwendo rwevashanyi yakaguma yava a chiitiko chinoshamisa yakakodzera kugoverwa, kunyanya nekuda kwezvinhu zviviri: yekutanga, wandinofamba naye, waaishanda naye muUzbek akange asati ambofamba nekuda kwekunakidzwa nekuita kudaro kana kuona gungwa kana kuravira rusununguko, uye uyo pakutanga ini ndaisada kuti aende neni; uye wechipiri, zvitima zvehusiku, avo vatakamanikidzwa nemamiriro angu ekufunda muUSSR (izvo zvakanditadzisa kufamba ndisina mvumo chaiyo kana kugara muhotera) uye matinowirirana nevanhu vemarudzi ese vanoda kutaura nezveumwari uye munhu.
Nemaonero enguva, iyo kufamba kwemazuva kubudikidza maguta atinoshanyiraLeningrad, Tallin, Riga, Vilnius, Lvov, Kiev y Odessa, kutanga kubva Kharkiv): iyo barricades mu Riga, chiitiko chakasimba chechitendero muLvov, kuratidzira kwekuzvimiririra kwataive takabatanidzwa muKiev, semuenzaniso, yaive katarogu yemasaini pamusoro pekupfuura kwenguva.
Mukurondedzerwa kwerwendo kunoiswa mukati kudhindwa kwehupenyu hwezuva nezuva Makore maviri ekupedzisira eUSSR (ndakanga ndasvika munyika munaNovember 1989 kuti ndiite hunyanzvi hwekuongorora maziso) uye makore mashanu ekutanga ehupenyu hwekuzvimirira muRepublic (ndakagara muRussia kusvika Chikunguru 5).
Iri bhuku rakapedzwa ne yakanakisa mifananidzo naPedro Arjona, uye mamwe mafoto uye zvinyorwa zverwendo rweumambo, mune yakasarudzika edition yaReino de Cordelia.
SG: Ndinofunga bhuku rekutanga randakaverenga raive Kutandara mumupata yaEnid Blyton uye, gare gare, ese maitikiro aive aine uye kuve neiyo gang.
Kana ndikatora kubva mundangariro, izvo zvandinoyeuka se zvinyorwa zvekutanga mamwe nhetembo dzerudo mukuyaruka.
SG: Chekutanga chekutanga ... hapana zano. Ndinoyeuka ndichitarisira kwariri kurova zvitoro zvemabhuku Rudo Munguva YeKirarera nekuda kwekuravira kukuru mumuromo mangu kwakange kwandisiya Makore zana okusurukirwa pamwe nekuda kweicho chaihwo mashiripiti aGarcía Márquez aive kwandiri. Uye, pakati, ndinorangarira ndichida kuzvipa kune iyo Rayuela yeCortázar.
AL: Iye munyori anodiwa? Vanogona kuva vanopfuura rimwe uye nguva dzose.
SG: Ndiri fan hombe ye comic, uye ndinoedza kusapotsa chero chinhu che Joe sacco.
SG: Ndingadai ndakada kusangana Sherlock Holmes, uye ndakarembera naye muhofisi yeyangu ophthalmologist wandaishanda naye Dr. Conan Doyle. Ini ndinofunga zvingadai zvainyanya kukurudzira kwandiri kuti ndigadzire Frankenstein.
SG: Ini ndanga ndichizoti hapana, asi izvozvi zvandinofunga nezvazvo Ndaigara ndichiverenga kana kunyora ndakarara, kana zvirinani makumbo ako akatambanudzwa kumusoro, wakasununguka.
SG: La Svondo mangwanani, Mumubhedha. Kuverenga pachigaro chepamusoro chakatarisana negungwa zvakare mufaro mukuru.
SG: Ini ndinonyanya kufarira iyo comic and the Ensayo.
SG: Ndiri kuverenga Evhangeri yemaeels rakanyorwa naPatrik Svensson (Asteroid Mabhuku, 2020). Ndiri kufunga nezve nhoroondo yerumwe rwendo.
AL: Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa chiri kubva pachinzvimbo chako muchikwata chaunoumba kuIngenio de Comunicación?
SG: Kazhinji kutaura kwakaoma uye kune njodzi, asi kunamatira kuchikamu chebato randinorondedzera, ndinofunga rinoshanda zvikuru, richikura uye richitsvaga nzira nyowani dzekumisikidza kukosha kwemabhuku akadaro, achiashandura kunyangwe muzvinhu zvechishuwo, uye akazvipira zvakanyanya kuzvitoro zvemabhuku.
SG: Iyo nguva yatiri kurarama iri kuve zvakanyanya kuoma, asi handina mubvunzo kuti, kana chimwe chinhu chikasara, mukufamba kwenguva chichava chakanyanya kushata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Sara Gutierrez. Kubvunzana nemunyori weZhizha Rokupedzisira reUSSR